KNU Statement (3.1.2013)
Uploaded by Khine Thazin Ni Win
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်များမှ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် တိုင်းရင်း သားဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်စစ်ပွဲများရပ်စဲ ရန်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောငြိမ်းချမ်းရေးရောက် ရှိနိုင် ရန်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘော ထားရှိသည်။
saveSave KNU Statement (3.1.2013) For Later
History of Dawei
Tavoyan Youth Organization (TYO) Statement (Eng)
KNGY 6th conference Statement
SYCB Monthly Bulletin for April (Vol.6, Issue-75).PDF
SYCB Monthly Bulletin for June(Vol.6, Issue-77).PDF
SYCB Monthly Bulletin for March (Vol.6, Issue-74).PDF
SYCB Monthly Bulletin for May (Vol.6, Issue-76).PDF
TYO Statement (19 April 2013)
SYCB Monthly Bulletin for February (Vol.6, Issue-73).PDF
SYCB monthly Bulletin for December
Statment of Kawmoora
SYCB monthly Bulletin (January 2013)
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ (၀၃)ရက်
1. မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ခေါင်းဆောင်အချို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံရန် (၀၃၊ ၀၁၊ ၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုး သားအစည်းအရုံးဗဟိုဌာနချုပ်မှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။
2. ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုမန်းမန်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်နှင့်ဗဟိုကော်မတီဝင်ပဒိုစောလှထွန်းတို့ ပါဝင်သည်။
3. ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်များမှ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်တေ့ဆွုံရာ တွင် တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်စစ်ပွဲများ ရပ်စဲရန်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုရောက်ရှိနိုင်ရန် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောထားရှိသည်။
4. နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်များတို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည့်အချက်အလက်များနှင့် ရရှိလာသောသဘောထားများကို အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုများအတွင်း ထုတ်ပြန်သွားခြင်းကို ဆောင်ရွက်သွား မည် ဖြစ်သည်။
၁။ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း ၂။ ပဒိုမန်းမန်း
(+၆၆) ၈၁၈၀၇၆၂၇၉ (+၆၆) ၈၇၉၄၃၈၇၅၀
More From Khine Thazin Ni Win
Khine Thazin Ni Win